Mandraisa anjara amin'ny fifandanjana fitoviana simika | Rakibolana fampitoviana simika
Manomeza anjara amin'ny fampianarana Vietnamese
Manaova zavatra mahasamihafa
Maninona isika no sahirana ...
Manome mpampiasa an-tapitrisany isam-bolana ny tranonkalantsika ary mbola mitombo be ihany koa, mila mandoa vola ihany koa izahay hanolo-tena hanao fitazonana ny atin'ny tranokala. Vola an'arivony tapitrisa isam-bolana no vidiny amintsika.
Na izany aza, mandrakizay 10 taona tsy manana fidiram-bola manan-danja afa-tsy ny volan'ny mpanorina, tsy afaka miaina amin'ny fiakaran'ny vidin'ny fikolokoloana izahay. Noho izany, ny dokam-barotra mihazakazaka dia vahaolana vonjimaika handoavana ny vidin'ny 20-30%
Manantena izahay fa ny dokam-barotra ataonay dia tsy mampihetsi-po anao.
Raha mahita dokam-barotra tsy mifanaraka amin'ny fanabeazana ianao dia mifandraisa amiko mivantana [email voaaro]
Ahoana no ahafahanao manampy ...
Amin'ny maha-mpampiasa anao dia azonao atao ny manafoana ny doka block plugin, izany dia hanampy anay cents vitsivitsy isaky ny mitsidika anay ianao.
Amin'ny maha orinasa anao dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fifanarahana doka, manantena ny hiara-miasa maharitra izahay.
Amin'ny maha mahery fo antsika, afaka mandray anjara mivantana aminay izahay amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany. Ny 20% amin'ny fanomezana rehetra dia hafindra any amin'ny fikambanana mpiara-miasa tsy miankina aminy, izay miasa isan'andro isan'andro any ambanivohitra dia manamboatra làlana sy sekoly vaovao ho an'ny fanabeazana ho avy.